Suuqgeynta Adeegga Suuqgeynta waa inuu ku jiraa Liiska Angie | Martech Zone
Suuqgeynta Adeegga Suuqgeynta waa inuu ku jiraa Liiska Angie
Talaado, July 31, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Erayga afka wuxuu door weyn ka ciyaaraa abuurista summad sumcad wanaagsan leh isla markaana kicisa rajada laga qabo in lagu boodo kama dambaysta oo la sameeyo wax iibsasho ama adeeg. Websaydhku wuxuu leeyahay tiro badan oo ka mid ah goobaha dib u eegista… badankooduna waxay u furan yihiin isticmaaleyaasha aan la aqoon ee dhibaatada ku noqday tartamayaasha tartanka iyo dib u eegista beenta ah. Bogaggan ayaa kala ah ay buux dhaafiyeen tartamayaasha rajada ka leh inay waxyeelleeyaan sumcaddaada.
Ganacsiyadu way la yaaban yihiin inay ogaadaan sida macaamiilkeenu u kala duwan yahay, Liiska Angie, waa. Liiska Angie, adiga koontada ganacsigu waa lacag la'aan. Sumcaddaada waxaa laga dhisay aasaas dhan 1.5 milyan oo macmiil oo xoog leh, dhammaantood way diiwaangashan yihiin oo inta badan macaamiisha lacag qaata, iyagoo baabi'inaya fursadaha been abuurka ama dib u eegista eexda. Liiska Angie xitaa wuxuu bixiyaa adeeg dhexdhexaadin ah si loo hubiyo in arrimaha si sax ah loo soo sheego. Adeeggu wuxuu noqday mid caan ku ah adeegsadayaashiisa oo dadku inta badan raadiyaan Liiska Angie + adeegga iyo magaalada!
Liiska Angie waa soosaaraha ugu sarreeya qaranka ee dib-u-eegista lagu kalsoon yahay ee qandaraaslayaasha iyo dhakhaatiirta in ka badan 550 qaybood, sida saqafka, tuubbada, nadiifinta guryaha iyo dhakhaatiirta ilkaha. In kabadan 2 milyan oo xubnood ayaa hubiya Liiska Angie si ay u helaan adeeg bixiyeyaasha maxalliga ah ee ugu wanaagsan uguna keydsadaan mashaariicda qiimo dhimista xubnaha gaarka ah
Liiska Angie waxay u furtaa bog shirkad kasta waxayna u qoondeeysaa qaabka kaarka warbixinta warbixin A ilaa F ah shirkadda. Adeeggu wuxuu ku dhiirrigelinayaa macaamiisha inay dib u eegaan qiimaha, tayada, ka jawaab celinta, waqtiga iyo xirfad-wanaaga, iyo buundooyinka oo ka tarjumaya wadarta guud ee dib u eegista macaamiisha.
Ganacsiyadu ma bixin karaan lacag si ay u socdaan Liiska Angie ama saamayn ku yeelan qiimeynta si uun, laakiin diiwaangelintu waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho digniino emayl si aad u awooddo:
Maamul sumcaddaada adoo akhrinaya kana jawaabaya warbixinnada iyo dib u eegista ku saabsan ganacsiga
Samee goob bakhaar si loo cusbooneysiiyo macluumaadka ganacsiga, loo soo bandhigo adeegyo iyo qiimo dhimis si loogu soo jiito macaamiisha
Kor u qaad qiimeyntaada weyn mar la gaaro!
Iyada oo qiimeyn weyn leh, Liiska Angie sidoo kale kuu ogolaanayaa qaybiyo heshiisyo bulshada.
Maxaa yeelay, Liiska Angie waa mid aad u adag oo ku saabsan noqoshada ilaha lagu kalsoon yahay, saxda ah, shirkadaada ayaa ka faa'iideysan doonta dib u eegista saxda ah ee macaamiisha dhabta ah. Markaad shaqeysid, waa inaad ku riixdaa macaamiishaada inay dib u eegis ku sameeyaan shirkaddaada Liiska 'Angie's List' si aad ugu wadi karto darajooyin wanaagsan iyo ganacsi badan habkaaga. Mid aad dardar ku hesho, hubi inaad ka faa'iideysato heshiisyada Liiska 'Angie's List' iyo xayeysiinta joornaalka. Bulshadu way ku qanacsan tahay heshiisyada tan iyo markii ay aqoonsadeen kuna kalsoon yihiin ganacsiyada loo oggol yahay inay ku xayeysiiyaan halkaas!
Shirkad kasta oo adeeg oo khatar ku ah sumcadooda waa inay maareeyaan oo ay horumariyaan joogitaankooda Liiska Angie. Isdiiwaangeli maanta!
Tags: Liiska Angiexanaaqdib u eegista macaamiishaFaallooyinka internetkaReviews
Buddy Media iyo Iibinta Suuqgeynta Suuqgeynta